Izitshixo ezi-5 zoPhawu lwakho oluPhumeleleyo lwaBantu | Martech Zone
Iindlela ezi-5 zoPhawu lwaKho oluPhumeleleyo
NgoLwesithathu, nge-13 kaJanuwari 2010 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ndibe nencoko nomhlobo wam namhlanje kwaye ndafumana i-imeyile komnye ebuza ingcebiso yam malunga nendlela yokwakha uphawu lwabo lobuqu… kwaye ekugqibeleni ndizuze ngalo. Esi inokuba sisihloko esiphendulwa ngcono ngumhlobo uDan Schawbel, a ingcali yophawu lomntu… Ke gcina iliso kwibhlog yakhe. Ndiza kwabelana ngeengcinga zam ngento endiyenzileyo kule minyaka ilishumi idlulileyo, nangona kunjalo.
Ziveze ukuba unqwenela ukuthathwa njani - Ndicinga ukuba abantu baphantse bothuka xa bendibona… ndimkhulu, ndinomdaka, ndinoboya, ndingwevu, ndinxiba iijini neeT-shirts. Ndiyakhukhumeza kwaye ndikhukhumele indlela yam emini. Kwi-Intanethi, ndizibonakalisa ngokungqinelana neenjongo zam kunye nendlela endithemba ukuba abanye baya kundibona ngayo. Oko akutsho ukuba mna ukuthetha kakubi ngokwam… andenzi njalo. Andiyi. Ndilumkile ukugcina i-intanethi yam ikwindlela enobuchule kwaye ndingazibeki emngciphekweni wokuyonakalisa ngokuwisa iibhombu okanye ngokuzama ukuzama ukuthoba abanye abantu okanye iibhlog ezikwi-Intanethi. Ndingabaxelela ukuba bayaphazama… kodwa ke ndiyabahlonipha. 🙂
Ungaze uyeke ukusebenza nzima ukuze ufike apho. Andikholelwa kwimilinganiselo yomsebenzi / yobomi. Ndicinga ukuba yinto enqabileyo kuba ndiyayithanda into endiyenzayo kwaye ndifuna ukuba yinxalenye yemihla ngemihla. Ndinexesha elininzi lokonwaba kunye nosapho, nam. Nangona kunjalo, andizukubeka esichengeni igama lam kunye namashishini endisebenza nawo ukuze ndiye kwenye indawo nabahlobo bam. Uxolo, buddies!
Nyuka ngalo lonke ithuba. Xa ithuba liza kum lokuba ndibhlog, ibhlog yeendwendwe, ukuphawula, ukubhala, ukuthetha, ukubonisana, ukwenza ikofu… ndiyayenza. Ndicinga ukuba lo ngoyena mahluko mkhulu ngobukhulu wabantu abaninzi abaphumeleleyo xa kuthelekiswa nabo balwa nayo. Ukuba umntu undicela ukuba ndenze intetho ngesihloko andinalo nofifi malunga nalo, ndiza kuyitsibela. Ndiza kungena, uGoogle akhuphe kuyo, ufumane iingcali, kwaye wenze intetho enkulu. Ndikwiibhodi ezininzi kwaye ndinceda iinkampani ezininzi kunye nabantu kangangoko ndinakho nakweyiphi na imini.
Qiniseka xa unikela intetho. Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo ndiye ndathi kumcebisi entlanganisweni, "andikuxeleli le nto kuba andivumelani nawe, ndikuxelela le nto kuba uphazamile." Izandi ziqatha - ndiyazi… kodwa ikhuphe umoya ngaphandle komfo ukuze ayeke ukudlulisa izimvo zakhe ezingenangqondo kwaye amenze ukuba aqale ukumba kwiinyani. Ayikuko ukuba ndihlala ndinyanisile - andiyiyo. Kungenxa yokuba xa ndizithembile, andibavumeli abachasayo ukuba bonakalise amandla ngokutyhala ukungakhathali kwabo kunye nentandabuzo. Baninzi kakhulu abo bantu ehlabathini. Ndimdala kakhulu ukuba ndingabamamela, ngenxa yoko ndibavalela kakhulu ngalo lonke ithuba endilifumanayo. Ngale ndlela sinokufumana umsebenzi.
Yeka ukumamela abantu abakubambayo. Umama wagcuma xa ndimxelela ngeshishini lam. Imibuzo ngezibonelelo, ukhathalelo lwempilo kunye nokuthatha umhlala-phantsi kwandilandela isibhengezo sam… yiyo loo nto ndingakhange ndithethe noMama wam phambi kokuba Ndaqala ishishini lam. Undithanda ngentliziyo yakhe yonke, kodwa akakholelwa kum. Ewe, huh? Kulungile… ndilungile kuloo nto… kwaye ndiyamthanda ngentliziyo yam yonke, naye. Uyaphazama nje. Unokuba nabo bakungqongileyo abenza okufanayo. Yeka ukubamamela. Yityhefu kwimpumelelo yakho.
Uphawu Wena ®
Uhlaziyo: UKristian Andersen wenze umsebenzi omnandi e Ukuthetha neempawu zobuqu kule ntetho (enkosi kuPat Coyle ngokuyichaza):
Nanku umzekelo wendlela endijonga ngayo izinto… Ndifunde kwi-Andy's Ukuthengisa iPilgrim blog ukuba uPilgrim wokuThengisa wakhethwa ukuba abe kuluhlu oluphezulu lweeBlogi eziCetyiswayo zaBaphathi beeNtengiso zeQela leNethiwekhi (MENG). Ifanelekile… Intengiso yePilgrim yibhlog endiyifunda yonke imihla.
Nditshilo… Ndifuna kolo luhlu. Asingombandela wokhuphiswano… yinjongo. Ndifuna i Martech Zone ukuthathwa njengenye yeebhloko zeNtengiso ezilungileyo kwi-Intanethi ngokunjalo. Siyaqhubeka nokubeka kakuhle kulo lonke uluhlu kwaye ukufundwa kwethu kuyaqhubeka nokukhula… kodwa ndifuna njalo ukuba uluhlu!
Sele ndikho okulandelayo ezinye of abo blogs kwaye ngoku ndiza kuchukumisa isiseko kunye nezinye iiblogi kulo nyaka uzayo- ngamagqabantshintshi, ngokunokwenzeka ngeziganeko, ukubhalela umxholo wabo omkhulu, kunye nokunxibelelana nabo xa benemisebenzi emihle. Ndiza ku amandla Mna kumnatha wabo.
Ukunyanzelwa kuvakala kukubi, kodwa ayisiyiyo. Ukuba u qhubeka nokutyhala kwinto ixesha elide ngokwaneleyo, iya kuhamba. Andizukuqhatha, ukuxoka, ukuba, ukuqhekeza okanye ukusebenzisa indlela yam eya kule nethiwekhi. Ndiza kuqala ukubonelela ngexabiso kubo de ndibonwe njengeasethi. Nje ukuba oko kwenzeke, iingcango ziya kuvulwa.
Yiyo le into ebonakalise ukuba yimpumelelo kum kwaye ndiqala ukwenza inzuzo kuyo. Ndiphinde ndatyala imali phantse kuyo yonke into ukuze ndiqhubeke ndiyityhalela phambili imali… ndiyathemba ukuba ngenye imini ndiza kuba nembiza entle enkulu, nangona kunjalo. Andikhathazeki ngemali kakhulu (kuphela kukungabikho kwayo). Kanye njengokuba ndizithembile kum, ndinokuzithemba ekugqibeleni ekuzuzeni umsebenzi wam onzima.
Ingaba ulunde ntoni? Ziveze ngendlela onqwenela ukujongwa ngayo, sebenza nzima, kwaye unyuke ngalo lonke ithuba. Yakha indlela yakho kwaye ungalindi nakubani na ukuba akuxelele xa unako okanye unokufikelela phi.
tags: brand wenauzenzele igamaka + aNgundoqouKristian andersenukutshatyalaliswa komntuipower Pointintshumayeloi slidedi
Utshintsho kwiWebhusayithi encinci ngeMpembelelo eNkulu
Ukuzisa uhlalutyo lwamashishini kwi-WordPress
Jan 13, 2010 kwi-11: 08 AM
Nice Doug, I love the “Force” via value. Cheers!